Etu esi ewepu ụda site na vidiyo enwetara na ngwa Ozi | Esi m mac
Otu esi ewepu ụda site na vidiyo a natara na ngwa Ozi
Taa enwere ọtụtụ ngwa izipu ozi dị na Mac. Karịa ya na ngwa WhatsApp na-adịbeghị anya maka MacOS, mana anyị enweghị ike ileghara otu n'ime ndị mbụ na nke kachasị kwụsie ike anya, dịka Telegram.
N'ezie Apple nwere ozi izipu nke ya na nke a oge ọ bụla m na-eji ya amasị m ya ọzọ. Nke nta nke nta ọ na-etinye ọrụ ọhụrụ, mana n'ụdị Apple, na-enweghị ọgwụ ọjọọ naanị n'ihi asọmpi ahụ, na na mbinye aka Apple stampụ: mfe na ịdị mfe nke iji.
Mgbe anyị natara vidiyo site na ngwa ozi na Mac anyị, anyị nwere ike ịkpọ ya ozugbo, ebe a na-ebudata ya na akpaghị aka. Anyị nwere ike ịchọ ịmata ihe dị na ya, mana anyị na-ezukọ n'oge ahụ n'ihu ọha ma ọ bụ ndị mmadụ gburugburu. Anyị nwere ike belata olu nke Mac anyị, mana anyị na-ewepụ ụda niile. Ọ bụrụ na ọ bụghị naanị na anyị chọrọ ogbi ọdịyo nke kwuru vidiyo anyị nwere nhọrọ.
Iji mee nke a, dị na-amalite na-akpọ vidiyo na na akụkụ aka nri ya ala anyị ga-ahụ akara ngosi nke ọkà okwu nwere ụda olu dị n'okpuru. Imechi ya, anyị ga - pịa akara ngosi na anyị ga-elele na ọkà okwu ebili mmiri na-apụ n'anya. N'oge ahụ anyị ga-emechi vidiyo anyị ọnụ ma anyị nwere ike ịhụ ya na-enweghị nsogbu ndị gbara anyị gburugburu.
N'ikpeazụ, dịka ozi agbakwunyere. Enwere ike igosi vidiyo ahụ pere mpe. N'okwu ahụ, anyị nwere ike ịhụ vidiyo mgbe niile na ngwa ndabara nke anyị kenyere iji hụ usoro vidiyo a na Mac. Iji mee nke a, anyị ga-pịa aka nri nke òké anyị ma ọ bụ jiri mkpịsị aka abụọ n'otu oge, ọ bụrụ na anyị mere hazie anyị trackpad, imeghe onodu menu. N'oge ahụ anyị nwere ike pịa nhọrọ mmeghe na vidiyo ga-emeghe na ọkpụkpọ e kenyere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Otu esi ewepu ụda site na vidiyo a natara na ngwa Ozi
WWDC 2017, LG UltraFine lara ezumike nká 5k, Planet nke Apps na ọtụtụ ndị ọzọ. Kachasị mma izu na SoydeMac